Ny Tsimatimanota No Fehikibo Mampifandray Ny Fandripahana Tlatlaya, Ny Mpianatra 43 Tsy Hita Ary Ny Fandosiran’i El Chapo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2015 8:02 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , English, русский, Español
“Mandratra ahy ianao Meksika.” Diabe fanoherana ny fisamborana sy ny fanjavonan'ireo mpianatra 43 avy ao amin'ny sekolin'ny mpampianatra ao Ayotzinapa. Sary avy amin'ny kaonty Flickr an'i Sofia teo ambany fahazoandalana Creative Commons.
Navoaka voalohany tao amin'ny Sin Embargo ary naverina navoaka teto noho ny fifanarahana fiaraha-miasa ity lahatsoratra ity.
Ahitana singa roa iraisana mampiahiahy ny fandosiran'ny lehiben'ny fikambanana Sinaloan mpanondrana zava-mahadomelina, Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán, ny fandripahana tao Tlatlaya, ary ny fanjavonana mpianatra 43 avy amin'ny sekolin'ny mpampianatra ambanivohitra ao Ayotzinapa, dia ny tsimatimanota sy ny tsy firaharahàna tanteraka ny lalàna – io dia araka ny tatitra nataon'i Mary Speck, Lehiben'ny Tetikasa ao Meksika sy Amerika Afovoany ao amin'ny Vondron'ny Krizy Iraisam-pirenena.
Araka ny lahatsoratr'i Speck izay niseho tao amin'ny Huffington Post, “nampiharihary ny fahalovana ao anivon'ny polisy monisipaly ny fakàna ankeriny ireo mpianatra 43 tao amin'ny sekoly ho mpampianatra ao Ayotzinapa, Iguala, izay tsy vitan'ny hoe tsy nahavita nisoroka fa nandray anjara tamin'ny fakàna ankeriny sy famonoana olona faobe ihany koa, araka ireo mpampanoa lalàna federaly. Ny trangan'i Tlatlaya, nahafaty ireo 22 noahiahiana, hita ho toa novonoina ny sasany, no nanala sarona ny habibiana ao anivon'ny tafika mitam-piadiana deraderain'ny firenena, ny telo amin'ireo mpikambana ireo miatrika fanenjehana noho ny famonoana olona.” Manamarika i Speck.
“Tokony ho takatr'ireo manampahefana ankehitriny fa na ny mpitandro filaminana mahomby sy ireo hetsiky ny tafika aza dia tsy hitondra fiafaràna amin'ny tsimatimanota izay mamely ireo andrim-panjakana.”
“Manala-baraka ireo manamboninahitra maro sy ireo mpiasam-panjakana izay manao ny asany am-boninahitra ireo hetsika ireo – matetika miatrika loza goavana – miady amin'ireo mpisetrasetra mampidi-doza”, hoy i Speck manampy.
Ny fandosiran'i “El Chapo” [Shorty] Guzmán, lehiben'ny fikambanana matanjaka Sinaloa mpanondrana zava-mahadomelina, no farany indrindra amin'ireo andiana tranga maha-sadaikatra mamely ny fanjakana Meksikana. “Saingy raha toa ka tokony hotohizana miakatra hatrany ambony mpanome baiko ireo fanadihadiana ataon'ny komity momba ireo heloka bevava na fanadinoana manome làlana ho amin'ny tranga mahatsiravina tahaka izany hahazo toerana, ny fanjakana indray no tahaka ny manaraka tetikady fitokana-monina,” hoy i Speck manamafy.
Ohatra iray amin'izany, mitanisa ny fanjavonanan'ireo mpianatra tamin'ny 26 Septambra 2014 izy, tranga iray izay ireo manampahefana teo an-toerana irery ihany, anatin'izy rehetra ireo ny ben'ny tananàn'i Iguala, José Luis Abarca, no tena miatrika fanenjehana, na teo aza ny zava-misy hoe nahafantatra mikasika ny fanjavonana ny fanjakana, ny firenena ary ny manamboninahitry ny tafika, saingy “tsy manao n'inona n'inona mba hisamborana ireo meloka.”
“Mifandray avokoa ireo fanjavonana faobe, toy ny tamin'ny 26 Septambra 2014, ny fakàna ankeriny ireo 43 mpianatra ho mpampianatra tany Iguala, ireo famonoana toy ny tamin'ny Jona 2014 ka namonoan'ny tafika ireo 22 nolazaina fa mpanao heloka bevava tao Tlatlaya, ary ankehitriny ny fandosiran'i “El Chapo” Guzmán. Imbetsaka ireo manampahefana napetraka hampanaja ny lalàna no nanapa-kevitra ny hamela malalaka na tsy hiraharaha an'io, na avy amin'ny fitiavam-bola tafahoatra, ny tsy fahampiam-pahaizana, ny tahotra na valifaty. Ny tsy firaharahàna lalim-pàka ny maha-lalàna ny lalàna tahaka izany – na avy amin'ireo izay mihambo ho manaraka antsipirihany aza – tsy ho resy mora foana. Hitaky fahaiza-mitarika sy fahavononana izany, tsy hoe fotsiny miainga amin'ny tsy misy dia handeha hanenjika ny mpanao heloka izay mankahàtra ny andrim-panjakana misy eto amin'ny firenena, fa koa ireo izay niara-nitankosina taminy avy ao anatiny nandritry ny taompolo maro”
Araka ny lazain'i Speck, mety “hanampy hamerina indray ny fitokisana sasany amin'ny herin'ny fanjakana ny fahasamborana indray an'i ‘El Chapo’, izay efa nandositra indray mandeha avy any amin'ny fonja Meksikana tsara aro tsara indrindra. Tokony ho takatr'ireo Meksikana manampahefana ankehitriny fa na ny mpitandro filaminana mahomby sy ireo hetsiky ny tafika aza dia tsy hitondra fiafaràna amin'ny tsimatimanota izay mamely ireo andrim-panjakana”
Misy fanafodiny ve?
Ho an'ny mpanoratra ilay fandalianana, ny hany sisa vahaolana azo raisin'ny fanjakana dia ny mampanao “amin'ny fomba feno, fanadihadiana tsy mitanila, alefa amin'ny fitsarana misokatra sy fanomezana sazy hentitra ho an'ireo mpanatanteraka sy ireo atidoha mpikotrika – na toy inona na toy inona tanjany.”
“Io no hany làlana hisorohana ny heloka bevava sy hamerenana ny fitokisana ny firenena izay poak'aty hatrany ny fampanantenana fiarovana sy rariny ho an'ny maro amin'ireo olom-pireneny “
Ny fandosirana nahatalanjona vao haingana indrindra sady nahatalanjona nataon'i El Chapo avy tao amin'ny fonja tsara aro indrindra ao Altiplano ao amin'ny Fanjakàn'i Meksika, dia natao tamin'ny alàlan'ny tonelina lava mahatratra 1,5km. Voalohany, nitsoaka faritry ny fonja izy tamin'ny 2001 tamin'ny fiafenana tao anaty sarety iray fitaonan-damba. Tamin'ity indray mandeha ity, sarotsarotra kokoa ny tetika izay nidiran'ny fihadiana tonelina “tao ambanin'ny toerana fandroany, nitatra efa ho iray kilometatra, misy fanodinana ny rivotra sy jiro manazava.”
“Henatra iray ho an'ny governemanta Enrique Peña Nieto ilay fandosirana mampitolagaga, izay nametraka ny fisamborana an'i Guzman ho sahala amin'ny hafatra nalefa momba ny famelezana goavana an'ireo heloka nomanina mialoha, tamin'ny volana Febroary 2014. Ny hetsika sarotra tahaka izany dia tsy afaka notanterahana raha tsy misy ny fanampiana matihanina avy any ivelany sy avy ao anatiny – miampy fatra goavan'ny tsy fitaharahàna iniana atao. Saingy mihoatra lavitra noho ny famelezana filoha iray, ny governemana, na ny antoko politika iray io. Manozongozona ny fitokisan'ny vahoaka Meksikana koa ny hoe ny mpiasam-panjakana – avy amin'ny mpitandro filaminana ka hatrany amin'ireo mpampanoa lalàna, ny mpitsara ary ireo mpiambina ny fonja – dia afaka amin'ireo fampanantenana fandriampahalemana sy rariny,” hoy i Speck manoratra.
Manamarika ny fitomboan'ireo hery fiarovana nanomboka ny taona 2006 izy, taona izay nanamarika nanombohan'i Felipe Calderon, filoha tamin'izany, ny ady tamin'ny varotra zava-mahadomelina. Ny tafika, ohatra, 250.000 dia lasa 274.000, raha toa ny mpitandro filaminana federaly 13.000 lasa mihoatra ny 40.000.
Tao amin'ny lahatsoratra iray navoaka tamin'ny The Huffington Post, milaza i Speck fa, “ny fampiharana lalàna dia anisany tongotra iray hampandehanana ny politika fiarovam-bahoaka, na izany aza, tsy maintsy miankina ihany koa amin'ny fisorohana, ny fitsarana ary ny fanarenana. Ny ankamaroan'ny polisy monisipaly nisahana ny fisorohana ny heloka bevava no mbola marefo, raha tsara indrindra, mpanao kolikoly na tafiditry ny mpanao ratsy, raha ny ratsy indrindra.”
Tohizan'ny mpanoratra amin'ny fanipihana hoe “tototra tsy afa-manoatra ny fitsaràna, tsy mahavita manome fitsarana mahomby ara-potoana”. Efatra monja isaky ny mponina 100.000 ireo mpitsara ao Meksika, lavitra raha oharina amin'ny an'izao tontolo izao izay 17 ho an'ny mponina 100.000, hoy ny Global Impunity Index. Misy maherin'ny 230.000 ireo voafonja ao an-tranomaizina, mihoatra lavitra ny 64.000 natao ho an-dry zareo.”
Mampitandrina i Speck fa maro amin'ireo voafonja no “voarohirohy eo ampiandrasana fitsarana, izay ny fihazonana azy dia tahaka mamadika azy ireny ho toy ny olona mpanao heloka bevava raindahiny, tsy misy traikefa azo avadika ho vola, aorian'ny fanafahana azy ireo. Na ny fonja federaly tsara aro indrindra ao Altiplano nofidiana mba hihazonana an'i Guzmán aza dia efa mihoatra ny tokony ho zakany, araka ny tatitry ny vaovao, ary iray monja amin'ny mpifonja dimy no efa voahelka.”